Ihe anyị ghọtara oge agwa Israel?
Israel na-weghachiri eweghachi dị ka a mba na Juu gbakọtara laghachi n'ala.
Ugbu a, anyị agaghịkwa mkpa ichere ka ndị Juu ga-alaghachi n'ala ha, ọ ghọrọ n'ezie afọ 70 gara aga.
Ihe anyị ghọtara ihe nke a pụtara?
Ọ bụrụ na anyị na-aghọtaghị nke a, ọ pụtara na anyị ga-ajụ na nghọta nke okwu amụma. O nwere ike ụda ịrịba ama, ma ọ pụrụ n'ezie igosipụta otú a.
Ya mere, ebe anyị pụtara. Ọ ugbu a mere ikpeazụ 70 afọ a na otú buru amụma doro anya na ndị na-agụ Akwụkwọ Nsọ amụma n'ọdịnihu na ọ ghọtara na a ga-eme.
N'ebe a, anyị ga na-enye ihe atụ ụfọdụ nke Christian nkwusa na oge hụrụ na okwu amụma.
Na 1600s, biri John Owens, bụ onye English chọọchị onye ndú na ọkà mmụta okpukpe. E bụ n'oge ahụ abụghị a enwetụ olileanya na ndị Juu nwere ike laghachi obodo ha. N'agbanyeghị na a na-atụghị John Owens ndị a:
"Ndị Juu ga-achịkọta si n'akụkụ nile nke ụwa ebe ha na-agbasasịkwa, me laghachi n'ala nna ha."
The Protestant dere Paul Glegenhauver dere nke a na 1655: "A na-adịgide adịgide nloghachi nke ndị Juu n'ala ha na-Ebighị Ebi kenyere ha site na Chineke site na-akparaghị ókè nkwa Abraham, Aịzik na Jekọb."
Anyị ga-atụ ụfọdụ si gburugburu a narị afọ. August Hedstrom nyere na 1912 bipụtara akwụkwọ ya Studies na amụma.
Na ya na o dere: "N'ikpeazụ, na-achọpụta na UTI Turkish Alaeze Ukwu ga n'oge ahụ na-otu nọọrọ onwe ha free ala, ya bụ na ndị Juu State, ma ọ bụ ihe ọ ga-akpọ."
The Danish ozi C. Skovgaard-Petersen dere akwụkwọ ịrịba ama na mgbe ụfọdụ, ọ na-e bipụtara 1919th
N'ime akwụkwọ a na-ede akwụkwọ na-enye okwu tupu Jizọs alaghachi, otú ndị Juu ga-azụ ná mba ya. O dere, sị a:
"Ma ọ bụla ikpe ọ ga-ewere dị ka eziokwu Bible, na Israel na-gbakọtara na obodo ha na-na-na a ime mmụọ vårbrytning n'ihu Onyenwe abịa. The odide na-adịghị emezu, ndị Juu na-adịghị ma na-abata onwunwe nke Palestine. "
Ọzọkwa dere Skovgaard-Petersen: "Anyị nwere ike mere na-atụ anya na ndị Juu ga-tupu nloghachi nke Jizọs Kraịst na-alaghachi obodo ya."
Ihe a na Otú ọ dị na-abịa nso bụ na Jizọs n'oge ọ bụla nwere ike na-abịa azụ, n'ihi na ihe ndị bụ isi amụma ọnọdụ a na e mezuru. Ọ bụ na anyị aghọta nke a na-na-esi na ya?
Vecka 18, söndag 9 maj 2021 kl. 21:30